Banyere Anyị - Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd.
Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2000, bụ ọkachamara emeputa aku nnyocha, mmepe na imewe nke ihicha na ngwá na granulating ígwè. Ọ bụ ugbu a ihe enterprise na ihe iche na nkọwa na China.Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2000, bụ ọkachamara emeputa aku nnyocha, mmepe na imewe nke ihicha na ngwá na granulating ígwè. Ọ bụ ugbu a ihe enterprise na ihe iche na nkọwa na China.
Anyị ụlọ ọrụ na-amịkọrọ elu uzu na ahụmahụ n'ụlọ na mba ọzọ, na-erube nnọọ implements na ISO9001 mba quality usoro ụkpụrụ iji hụ ngwaahịa mma. Na mmepe na nnyocha nke ihicha ngwá, anyị mgbe niile innovate ma gbanwee chepụta ma Nlụpụta a usoro nke elu na ike na-azọpụta ngwaahịa. Dị ka mkpa nke ndị ahịa, anyị enwela ihe karịrị iri anọ usoro nke ihicha, granulating, agwakọta na de-ehicha ngwaahịa. The ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe, na-eji na ihicha na dehumidification nke ulo oru ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaahịa na-emepụta ọgwụ, chemical, nri, ìhè ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ọrụ, na-ọma natara site ọrụ. Ahịa na-nnọọ ka na-ule na nnyocha.
Anyị ụlọ ọrụ na-emi odude ke mma Chinese Jiangnan (ndịda nke Yangtze River) obodo na ama ulo oru obodo Changzhou. Ọ na-emi odude ke ala nke Shanghai na Nanjing Economic Development Mpaghara, na obi ụtọ ihu igwe na-adaba adaba njem. The ụlọ ọrụ nwere ike oru ike, zuru okè ule usoro, ọkaibe nhazi akụrụngwa na iwu siri ike management usoro. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ọhụrụ na ndị agadi ahịa, enyi si n'agbụrụ dị iche iche n'ụlọ na mba ọzọ ileta na-arụ ọrụ ọnụ ike a mma n'ọdịnihu!